Akanjo zipo | Mpanamboatra zipo ambongadiny, mpamatsy
Akanjo lamaody vehivavy zipo lava miloko mahafinaritra ho an'ny lohataona fahavaratra
Ity zipo boiffian chiffon malaza ity dia vita amin'ny fitaovana tulle ahazoana aina, izay marevaka amin'ny hoditra sy marefo, mitondra fampiononana anao mandritra ny andro. Ny lamba avo lenta dia mahatonga ny zipo iray manontolo ho kanto nefa manjavozavo. Ahosotra amin'ny halavan'ny vodin-tongotra izy io, ary lehibe kokoa ny moron-tongotr'izany, mampiseho toetra milay sy mihaja. Ny zipo lava lava lava dia hampitombo ny maha-vehivavy rehefa tonta.
SK870005 2021 Fivarotana mafana an-tsokosoko zazavavy maroloko kanto ho an'ny fahavaratra
Ity zipo mini lava volo ity dia manana endrika plastika sy haingo ary fanidiana. Safidy ahazoana aina sy maivana, lamba satin, safidy milay amin'ny hoditra ary marefo, maro loko. Tafio ny zipo kelinay mahafatifaty mba hampiavaka anao amin'ny vahoaka.
Halavany: ambonin'ny lohalika
Karazana: zipo pleated
SK870001 Fahatongavana vaovao 2021 Vehivavy volo volomparasy avo valahana zipo satinina malaza indrindra amin'ny lohataona
Ny zipo satin lamaody vaovao amin'ny fahavaratra, endrika misarona ary hem tsy ara-dalàna, famolavolana tsy mitongilana, fanidiana zipper tsy hita maso amin'ny sisiny, malefaka, maivana ary ahazoana aina. Ny akanjo satin slip ilaina, na mampakatra na misintona, dia azo eritreretina ny fisehoana rehetra manampy famirapiratana sy fahatsapana voadio. Lamba satin lamaody sy loko volomparasy volomparasy, mendri-kaja sy kanto no manasongadina ny toetranao.
- Midi halavany
- Fiakarana avo
- Silhouette A-tsipika
SK870002 2021 Vehivavy lamaody maroloko volon'ondry lava miolikolika somary miloko
Ny zipo plastika mahazatra dia tena mety amin'ny akanjo isan'andro, filalaovana andraikitra, fanamiana ary matetika. Mahafinaritra sy maivana ary tsara tarehy izy io. Ny valahany dia elastika, mora apetraka ary esorina, safidy maro loko, ampio loko isan-karazany amin'ny fahavaratra mafana. Vita amin'ny fibre polyester 100%, akanjo mora karakaraina izy io.
SK870001 2021 Fivarotana mafana multicolor Satin tsara tarehy zipo lava ho an'ny lohataona fahavaratra
Overview Quick Details Vondron-taona: olon-dehibe Miralenta: Vehivavy Karazan-doko: Fehin-kibo henjana: Akanjo voajanahary Halavany: Midi Style: Haingon-trano mahazatra: Tsy misy 7 andro ny filaharany filaharana filaharana: ...
SK870003 2021 Fivarotana mafana tovovavy ankizivavy Jeans mahazatra maizina manga CF Slit vehivavy midi lava denim zipo